Madaxweynaha Puntland oo ku baaqay shir deg-deg ah oo lagu xaliyo tabashooyinka la xiriira Doorashada – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta ka qeyb-galay Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Caalamka, oo ay ka qeyb-galeen Dowladda Federaalka ah, Dowladdaha xubnaha ka ah iyo Wakiillada Beesha Caalamka iyo Wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa hadal-jeedintiisa kaga hadlay horumarka Puntland gaartay labadii sano u danbeeyay, saameynta Covid-19, Ayaxa iyo duufaanta GATI, xaaladda dalku marayo, gaar ahaan arrimaha doorashada, Kheyraadka iyo dib-u-eegista Dastuurka.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay in la isugu yimaado shir deg-deg ah, si loo xaliyo tabashooyinka la xiriira Doorashada, wuxuu Madaxweynuhu ku baaqay in Ciidamada laga saaro Garbahaarey, si ay ugu suuragasho Jubaland inay halkaasi doorashada ku qabato.
Sidoo kale Madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in wax laga qabto tabashada ka jirta Guddiga Doorashada ee Somaliland, lagana talagaliyo dhammaan siyaasiyiinta Somaliland oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Puntland waxay soo jeedisay in dib-u-eegista Dastuurka laga wada xaajoodo doorashada kadib, si loogu helo wakhti ku filan oo looga baaraandago.
Madaxweyne Qoor-Qoor “Galmudug waxaa ka go’an taaba-gelinta iyo hir-gelinta heshiisyadii Dhuusamareeb (1,2.3)”